Playa d'Aro: ihe ị ga-ahụ. Okirikiri ala nrọ na ihe owuwu ụlọ | Njem akụkọ
Playa d'Aro: kedu ihe ị ga-ahụ?
Louis Martinez | | Ebe njegharị, Osimiri
Kwuo banyere Playa de Aro na ihe ị ga-ahụ na obodo Catalan a ọ pụtara ime ya site na ọmarịcha coves na osimiri Costa Brava ma ọ bụ site n'okporo ụzọ njem. Ma sitekwa n'ebe nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke malitere na Neolithic, dị ka e gosiri site na Menhirs nke Vallbanera.
Playa de Aro dị n'etiti calong y San Feliu de Guixols. N'ebe ime ya na-agbatị site na aro Valley, larịị nke dị n'akụkụ osimiri Ridauras na ndị Sierra de Cadiretes na Gavarres massif wepụrụ ya. Dịka ị na-ahụ, ọnọdụ mpaghara ya nwere ihe ùgwù. Ma, na mgbakwunye, ọ mejupụtara mpaghara abụọ ọzọ: Castle nke Aro y S'Agaro. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta azịza nke ajụjụ a "Playa de Aro: gịnị ka ị ga-ahụ?", anyị na-agba gị ume ka ị gaa n'ihu na-agụ.
1 Osimiri na coves
2 Ilszọ ụkwụ na-eme njem
3 Ihe ị ga-ahụ na Playa de Aro
4 Ihe ị ga-ahụ na Castillo d'Aro
5 Ihe ị ga-ahụ na S'Agaró
6 Gburugburu Playa de Aro: Ihe ị ga-ahụ
Osimiri na coves
Cala Rovira, na Playa d'Aro
Dị ka ọ na-apụghị ịbụ ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere Costa Brava, Playa de Aro na-enye gị magburu onwe osimiri na nrọ. Nke kacha ewu ewu bụ n'etiti obodo mepere emepe. bụ nke nnukwu osimiri, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita abụọ n'ogologo ma nwee otu Cavall Bernat nkume, nke na-enweghị ihe jikọrọ ya na homonymous Montserrat.
Na, yana nke gara aga, ị nwere na Playa de Aro coves mara mma dị ka nke Canyers, del Pi, Belladona, Sa Cova ma ọ bụ Pedrosa. N'otu aka ahụ, n'obodo Sa Agaró ị nwere Osimiri Sant Pol na, ezigbo nso, nke Racó. Ha niile, nwere aja dị mma na mmiri doro anya, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu dị ka igwu mmiri. kayaking ma ọ bụ ịkụ azụ.
Ilszọ ụkwụ na-eme njem
Pla de Palol Roman Villa
Ọtụtụ n'ime ndị a osimiri na-hụrụ na ụkwụ nke Parapet ije, ụzọ na-ejikọta Playa de Aro na nso nso calong. Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe ị nwere ike ime na obodo Catalan ma na-enye gị ọmarịcha panoramic echiche nke Costa Brava. Anyị na-akwado ka ị lelee akụkụ ndị dị ka nke Rodones de Dintre na de Fora, nke na-apụta ma zoo dabere na oke mmiri. Ma ọ bụ kwa Atụmatụ Les Roques, na ọdịdị okirikiri ya pụrụ iche n'ihi oke mmiri ozuzo.
Tinyere nke gara aga, ị nwere na Playa de Aro ọtụtụ ụzọ njem ndị ọzọ na-erite uru n'ahịrị ụgbọ oloko ochie. N'ime ha, anyị ga-ekwukwa nke na-esonye n'obodo a San Feliu de Guixols. Akụkụ nke foduru nke Rome Villa nke Pla de Palol, nke e dere na narị afọ mbụ BC. Site na coves na osimiri dị iche iche na mgbe ị gafesịrị S'Agaró, ọ na-enye gị ohere ịmara San Feliú, onye ọnụ mmiri ya nwere ike ịghọta nke ọma site na hermitage nke Sant Elm, ụlọ ekpere e wuru na narị afọ nke XNUMX.
Ihe ị ga-ahụ na Playa de Aro
Nweta okporo ụzọ Playa de Aro
Ozugbo anyị gwara gị gbasara ọdịdị obodo Girona a, anyị ga-egosi gị ihe ị ga-ahụ n'ime obodo atọ ndị mejupụtara ya. Na anyị ga-amalite na Playa de Aro, nke bụ ndị kasị njegharị nke ha. N'ezie, n'akụkụ Playa Grande ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe ị nwere ike ịnwale nri na-atọ ụtọ nke Costa Brava.
O yikarịrị ka ị ga-anọ n'obodo a, ebe ọ bụ na ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ukwuu. Mana isi ihe ncheta nke ime obodo dị na Castillo de Aro.
Ihe ị ga-ahụ na Castillo d'Aro
N'agbanyeghị na ọ natara aha ọzọ, ọ dị nso na ndị bi na mbụ. N'ezie, ị nwere ike iji ụkwụ rute ebe ahụ. Ị ga-arịgo na ego ụlọ ụka, okporo ụzọ na-agafe agafe nke osisi na ihe ndọba oriọna gbara ya gburugburu nke ị nwere echiche mara mma banyere Costa Brava.
Ya mere, ị ga-abata na chọọchị Santa Maria, kwupụtara akụ omenala nke mmasị mba ma dị na square nke otu aha ahụ. Ewubere ya na narị afọ nke XNUMX ma dokwa ya nsọ site n'aka Bishọp nke Gerona, Berenguer Guifred. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ọla nke Catalan Romanesque.
Ma ọzọ ịmata ihe ga- Museum nke Doll ma ọ bụ Nina. Emere ya na 1997 ma nwee ihe karịrị narị iberibe asatọ nke onye na-anakọta onyinye nyere Josephine Teixidor ma nyekwa ya site n’akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ha bụ ụmụ bebi nke afọ na ụdị niile.
Ndị kacha ochie sitere na narị afọ nke XNUMX, mana enwerekwa ọtụtụ ndị sitere na XNUMXth. N'etiti ndị gosiri, otu mere na crochet site Isabel Muntada na mkpokọta ndị ọzọ nke ụdị ama ama dị ka Barbie ma ọ bụ D'Anton nyere.
N'aka nke ọzọ, na-esote ihe ngosi nka, ị pụrụ ịhụ benedormiens nnukwu ụlọ, ekwuputakwara maka ọdịmma omenala obodo. Eweghachila ya ọtụtụ oge, mana akụkụ ya kacha ochie sitere na narị afọ nke 1041. Agbanyeghị, akwụkwọ mbụ o pụtara na ya sitere na XNUMX.
Atụla anya na ị ga-ahụ nnukwu ụlọ ochie ochie. Ọ nwere ụdị dị iche iche, mana facade n'ụdị ọnụ ụzọ oghere nke nwere okirikiri ise na-apụta ìhè n'iwu ya. Ihe ọzọ dị n'ihu ya nwere windo na mbara ihu nke a kpuchirikwara ya ma mechie na gallery nke nwere ahịrị loopholes n'okpuru ya. Ma eleghị anya, akụkụ kachasị mma nke ụlọ ahụ bụ facade nke ndịda ya, nke nwere nnukwu oghere anọ na-akwado ogologo mbara ihu.
Ihe ị ga-ahụ na S'Agaró
Hostal de la Gavina, na S'Agaró
N'agbanyeghị ihe niile anyị gosiri gị, n'ezie obodo kacha dị egwu n'ime obodo niile bụ S'Agaró. n'ihi na ọ mara mma ime obodo wuru na mmalite nke narị afọ nke XNUMX maka klaasị nwere ohere nke mpaghara ahụ.
Ọ bụ ọrụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Rafael Maso ma zaghachi ụdị ahụ noucentista. Otú ọ dị, n'ime afọ ndị gafeworonụ, agbakwunyere ụlọ ndị ọzọ ọgbara ọhụrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, etiti etiti obodo mepere emepe bụ chalets mara mma nwere nnukwu ogige. N'ọtụtụ n'ime ha ị nwere ike ịhụ mmetụta nke omenala Ụlọ ọrụ Catalan na mgbagwoju anya nwekwara ọrụ dị ka ụlọ akwụkwọ, ụlọ tenis na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
N'ime chalet ndị mejupụtara obodo S'Agaró, anyị ga-ekwu nke Rafael Masó n'onwe ya, Roquet, Badía ma ọ bụ Bufalá. Mana anyị chọrọ ịkọwapụta abụọ ka ị na-etinyekwu uche na ha ma ọ bụrụ na ị gaa n'obodo ahụ.
A maara otu dị ka Senya White, nke bụ nke mbụ e wuru na 1924. Ikekwe n'ihi nke a, o nwere ebe dị mma, n'akụkụ Camino de Ronda nke anyị gwarala gị. Ọ dịghị anyị mkpa ịgwa gị na, site na ya, e nwere ọmarịcha echiche nke Costa Brava. Ọ bụ ụlọ nwere otu ezinụlọ nwere ala atọ nwere ihe owuwu ụzọ mbata na mbara ala.
N'aka nke ọzọ, nke abụọ bụ Ụlọ ọrụ nke Gavina, nke bụkwa ụlọ ezinaụlọ nke dị na Plaza del Roserar na mbụ. Masó n'onwe ya wuru ya n'etiti 1924 na 1929, n'agbanyeghị na ọdịdị ya dị ugbu a bụ n'ihi Francesc Foguera. Na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime ụlọ ndị kacha pụta ìhè na S'Agaró, ọ bụ otu n'ime ụlọ mbụ. N'akụkụ nke chere ihu n'ámá ahụ, ọ na-anabata usoro Italianate na classicist nke Noucentisme, ebe ogige ubi nwere ụdị ime obodo na nke a ma ama na Catalan.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na, n'akụkọ ihe mere eme ya, ihe nkiri ihe nkiri dị ka Ava Gardner, Elizabeth Taylor ma ọ bụ, n'oge na-adịbeghị anya, Sean Connery y Robert de Niro.
Gburugburu Playa de Aro: Ihe ị ga-ahụ
Obodo ochie nke Pals
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma nwee obi ụtọ na Playa de Aro, nleta gị na obodo Girona agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na ị maghị. obodo ndị dị nso onye bukwa nke ndi Bajo Ampurdan region. Ụfọdụ bụ ọmarịcha obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ebe ndị ọzọ bụ ihe bara nnukwu uru n'oge ochie.
N'ime ndị ikpeazụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa Ndị enyi, nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme center. Isi ihe na ya Ụlọ elu nke Oge awa, ihe ịtụnanya Romanesque wuru n'etiti narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Ị nwekwara ike ịgagharị n'okporo ámá ndị nwere ọnụ ụlọ ndị nwere oghere na windo ndị tụrụ atụ. I kwesịkwara ịga leta ya Churchka nke San Pedro, ya ochie mgbidi na ụlọ elu anọ malitere na narị afọ nke anọ na nke Ihe mgbe ochie Museum.
Anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ gbasara peratallada, kwuputara saịtị nka na akụkọ ihe mere eme na nke mebere otu n'ime ebe kacha pụta ìhè na echekwara kacha mma nke ihe owuwu oge ochie na Catalonia. Ị nwere ike ịhụ ihe fọdụrụ nke ya ụlọ site na narị afọ nke XNUMX ya na-asọpụrụ ụlọ elu, na Churchka nke San Esteve, nke XIII, na Peratallada Palace, site na XIV. Mana ịga ije n'ụzọ dị mfe n'okporo ụzọ ya ga-ebuga gị n'ụwa nke Middle Ages.
Banyere obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri dị nso Playa de Aro, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa Na-amalite, ya na ụlọ ndị India si America lọta, ya Romanesque isi nke Esclanya na ọmarịcha ájá ya. ma ọ bụ ihe dị egwu Tosa de Mar, na-adọrọ mmasị ụlọ nke bụ ihe ncheta mba na nke gụnyere ndị bi n'oge ochie echekwara nke ọma.
N'ikpeazụ, na ajụjụ "Playa d'Aro: kedu ihe ị ga-ahụ?", anyị azaghachila site n'igosi gị ụfọdụ ihe ịtụnanya okike nke obodo a dị na mpaghara Gerona, n'ime obi Costa Brava. Mana anyị agwala gị gbasara S'Agaró pụrụ iche na ihe ncheta nke Castillo de Aro. Anyị dụrụ gị ọdụ ka ị gaa na ụfọdụ obodo ndị dị nso, nke na-enye gị ma ihe ịchọ mma oge ochie na osimiri mara mma. Ọ naghị amasị gị ịga obodo Catalan?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Playa d'Aro: kedu ihe ị ga-ahụ?